Ngamunye wethu okungenani kanye ezimpilweni zabo wazama Muffin nge-apula. Othile amakhekhe enjalo okuphekiwe ugogo futhi othile baphanga Mommy. Kodwa isikhathi sesifikile lapho kudingeka ukufunda nokwenza Muffin okumnandi ne apula. Manje uzofunda indlela ukulungiselela namakhekhe egqinsiwe nemvubelo nale izithelo. Lokhu kwenziwa Yiqiniso, akulula kakhulu. Kodwa lezi amathiphu kuyokusiza futhi uzokwazi ukupheka muffins okumnandi ne apula.
Ngakho, ukuze bathokozise lamakhaya imikhiqizo Culinary, sidinga ezahlukene imikhiqizo. Bonke bangabangasokile elula kufinyeleleke umkhaya ngamunye. Okokuqala sizokwenza imvubelo imiqulu ne apula.
Izithako for inhlama:
amaqanda - 2 izicucu;
ubisi - 500 ml;
ufulawa - 1.2 kg;
ushukela - 150 grams;
imajarini noma bhotela - 200 amagremu;
imvubelo (dry) - 11 amagremu.
usinamoni - ukunambitha;
apula - 4 izingcezu.
Inqubo ukupheka namakhekhe amnandi
Ukuze uqale ukwenza phisa. Ekuqaleni, kubalulekile ukufudumeza ubisi. Kufanele chaza imvubelo. Ngemva kwalokho, sizodinga ufulawa. Kufanele ukungezwa ubisi nemvubelo. Khona-ke ingxube ixubene kahle ukugwema izigaxa ahlale.
I phisa eseqedile kufanele embozwe ithawula. Khona-ke kufanele ufake endaweni efudumele. Ukuze wenze lokhu, udinga i-isitsha sesibili ngamanzi afudumele. Kuyadingeka ukubeka phisa.
Indlela, inhlama kufanele landise ezikhathini eziningana. Kuzothatha imizuzu engamashumi amathathu kuya amane.
Yini okufanele uyenze ngokulandelayo? Lapho inhlama kufanelekile, kubalulekile ukuba ushukela. Khona-ke konke kufanele uhlanganise kahle.
Khona-ke udinga ukwengeza amafutha ugovuze futhi.
Ingxube kwaphumela engeza amaqanda.
Khona-ke yenza nezinye izithako kufanele kahle exubile.
Okulandelayo, engeza ufulawa bese uxove inhlama. Akufanele kube emaweni kakhulu futhi unamathele ezandleni. I uncamela uxove inhlama, uma kancane ukusakaza uwoyela anyanisi zemifino.
Khona-ke waphinda wafaka inhlama endaweni efudumele, ukuthi liye lenyuka cishe izikhathi ezimbili. Kuzothatha cishe ihora. Lapho inhlama uvukile, ungaqala ukwakha Bun ne apula.
Ake ukugxusha. Ngenxa yalesi sidinga apula. Badinga ukugeza, ikhasi bese uyawasusa cores of.
Okulandelayo, udinga apula uthathe tincetu (tincetu noma cubes). Kulokhu, konke kuncike izifiso zakho kanye fantasies.
Manje sidinga ibhotela. Kumele elicibilikile epanini.
Eceleni kubalulekile ushukela.
Esikhathini pan efanayo engeza apula kumele (oqoshiwe). Zonke ivuse ufafaze nesinamoni.
Manje sibeka ebhodweni umlilo omncane. Kuyadingeka ukuba ukucisha ukugxusha ne apula esikhathini imizuzu eyishumi nanhlanu, yebo, ibangele ngezikhathi ezithile. Ungazama futhi apula. Uma unomuzwa wokuthi angithi amnandi, ungase futhi wengeze Sakharkov.
Manje thina kanye ukugcwaliswa usulungile. Manje thina uqhubekela fun okuyingxenye - ukudalwa ophaya.
Okokuqala sidinga inhlama wenze amabhola amancane. Kulandele azishiye ngoba okuhlola. Athi ukwandisa ngobukhulu, badinga ukuba balolonge scones yabo.
Phakathi esethatha ucezu ngalunye ukutshala amabili wezipuni ukugcwaliswa.
Emaphethelweni wamaqebelengwane ixhunywe futhi zaschepit kanzima.
Okulandelayo, udinga ukwakha ngokwabo namabhanisi.
Okulandelayo, udinga ukubhaka. Kufanele ezinamafutha akahle. Thina ulithumele ezimise namabhanisi futhi ushiye ngekota yehora ngoba okuhlola.
Manje okudingeka uyenze Lubrication for ophaya. Ukuze wenze lokhu, uhlanganise noshukela neqanda. Lokhu mass Athambisa imikhiqizo yethu Culinary.
Umkhumbi patties kuhhavini osuke usushisa kakade at 180 ° C.
Bhaka kuthatha imizuzu amabili. Ngemva kwalokho umkhiqizo ungathola.
Yilokho, ehla esiphundu ukulungele! Sithemba ukuthi Muffin iresiphi ne apula oyithandayo. Jabulela itiye lakho nge ehla sweet!
Ilungiselela Puff namabhanisi
Emabululu Rolls ne apula - lokhu siyindlela olukhulu ngesidlo sasekuseni. Lungisa imikhiqizo efana akunzima, inqubo akuthathi isikhathi esiningi, ikakhulukazi uma ukwenza ukugxusha kusengaphambili, isibonelo, kusihlwa. Ekuseni uzodinga kuphela ukuthi unikezele ngezinsizakalo inhlama, wafaka le apula, imiphetho Ngokuzayo zaschepit ophaya. Khona-ke zonke okunethezeka udinga ukuthumela it kuhhavini. Wena, yebo, kungaba futhi ulungiselele khekhe lakho. Ungadliwa for ukuthi kukhona impela eningi. Nokho, khumbula ukuthi le nqubo, nakuba akunzima, kodwa eside ngokwanele. Ngakho, uma ungenayo isikhathi, kodwa usafuna ukupheka okumnandi amakhekhe Puff khekhe, kuyoba lula ukuba bawathenge esitolo. Ikakhulukazi ngoba manje lo mkhiqizo udayiswa kulelo zwe lethu, cishe kuyo yonke indawo, futhi ngempela ashibhe.
Emabululu Rolls ne apula ngezinye izikhathi ngokuthi "strudel". Kodwa ake uqhubeke ngqo ukulungiswa namakhekhe amnandi. Ukuze silungiselele ophaya ezifana ne apula, sidinga izithako ezilandelayo:
Puff khekhe (lula ngomumo) - 500 amagremu;
Iqanda isikhuphasha (for Lubrication) - 1 iyunithi;
ushukela - 0.5 izinkomishi;
apula - izingcezu ezintathu noma ezine;
Okokuqala udinga ukuthatha apula, geza zihlanzwe.
Khona-ke kudingeka usike wabayisa cubes.
Ngokulandelayo, sidinga ushukela nesinamoni. Kuyadingeka ukuba uhlanganise nabo bese wengeza ama-aphula.
Manje sidinga inhlama. Kwakufanele oyi-eneqhwa thina. Okulandelayo udinga sinqume tikwele. On ngamunye wabo udinga ukubeka inani elincane ukugcwaliswa.
Okulandelayo udinga zaschepit izikwele azungezile.
Khona-ke sizodinga bhaka. Kuyadingeka ukuba abeke iphepha.
Yini okunye okufanele ngiyenze? Pies phezulu kuya gcoba isikhuphasha ke babeka bhaka.
Sithumela nabo kuhhavini, osuke usushisa kakade ukuba degrees 200 imizuzu cishe abangamashumi amabili.
Emva kwalesi sikhathi, udinga ukuthatha okuphuma kuhhavini imikhiqizo okuholela futhi bawasuse pan. ehla esiphundu ukulungele! Ungakwazi uhlale phansi ukuze baphuze itiye.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela ukupheka okumnandi ophaya ne apula. Njengoba ubona, ukulungiswa ukwahlukahlukana lokhu kukhona namakhekhe ambalwa. Sithemba ukuthi lezi amathiphu kuyokusiza futhi uzokwazi ukwenza lezi amakhekhe ukuze izihlobo kanye nabangani babo. Inhlanhla ku emitameni Culinary!
Indlela Yokuthola pepper eyayigcwele: okuhle futhi ukunambitheka
Tilman Valentin Schweiger: Biography, Filmography kanye nempilo yakho
Lexicology ukuthi izifundo? Yegatsha isayensi ukutadisha ulwazimagama
Roses: i-weni nasekwelapheni tifo. Thina sikhule enempilo futhi ngokucebile imbali
Cash movie ne-Angelina Jolie